La kulan qaatayaasha cuntada: Bjorn iyo Anne-Lise - Cuntooyinka ku socda wheels
La kulan dadka qaata cuntada: Bjorn iyo Anne-Lise
Waa wax weyn, sababtoo ah mararka qaarkood waxaan la yaabanahay inay wax cunayaan in ku filan. Waxay ahayd arrin ilaahay bixiyo. ”
Taasi waa sida Tom uu u qeexayo waxa Cunnooyinka Lugaha la dhigaa isaga iyo waalidkiis, Bjorn iyo Anne-Lise. Markii waalidkiis ay labaduba bilaabeen inay ka cabsadaan waallida hore, Tom iyo walaalihiis waxay u yimaadeen iyaga oo ku saabsan helitaanka Cunnada Lugaha.
Waxay ka walwalayeen in waalidkood aysan wax u cunin sidii caadiga ahayd sidii la rabay, ama aysan helin cuntada nafaqada leh ee ay u baahan yihiin. Haddii ay ku heli karaan Cunnooyinka Gawaarida saddex jeer usbuucii, walaalaha, oo dhammaantood shaqeeya waqti buuxa, waxay go'aansadeen inay isla jiidan karaan oo ay ka caawin karaan diyaarinta cuntada maalmaha kale.
Cunnooyinku waxay siinayaan Bjorn iyo Anne-Lise caawimaad dheeri ah oo ay ugu baahan yihiin inay ku sii noolaadaan guriga Richfield halkaasoo ay ku soo barbaariyeen qoyskooda kuna yaqaanaan deriskooda. Tom wuxuu kaloo xusayaa in booqashooyinka ay ka helaan mutadawiciinta ay gacan ka geysato bixinta warbaahin bulsho oo aad loogu baahan yahay maadaama aysan ka bixin guriga sidii ay ahaan jireen.
In yar ka dib, Bjorn, Anne-Lise iyo Tom ayaa lagu soo bandhigay caan Bini'aadamka reer Minneapolis ee mashruuca sheekaynta, oo qoraheeda Stephanie Glaros uu sawiro iyo wareysiyo ka qaadayo dadka caadiga ah ee ku nool magaalooyinka Mataanaha ah. Wareysigooda wuxuu ka mid ahaa taxane ballaaran oo dadka u oggolaanaya dadka ku lugta leh Cunnooyinka Gawaarida inay wadaagaan sheekooyinkooda gaarka ah ee gaarka ah.
Bini'aadamnimada reer Minneapolis: Sidee bay ahayd markii aad ka timaadeen Norway?
Anne-Lise: “Aad uma fiicna (qosol). Waan ku hadli waayey Ingiriis. Midkeenna ma awoodin. Marka waxay ahayd waqti adag in la bilaabo. Laakiin waxaan la kulanay dad ku hadla af noorwiiji waana ogaanay kooxaha norwiijiga ah. Waxaan aadnay kaniisada Norwey. Waqti badan ayey qaadatay kahor intaanan baran Ingiriisiga maxaa yeelay marwalba waxaan kuhadlaa norwejiga, xitaa caruurta.
Bjorn: “Waxaan nimid 1959. Waxaan kaliya dooneynay inaan xoogaa ka yara fiicnaano. Waxaan ahay rinjiye guri, markaa way ii fududayd inaan shaqo helo. Maalin baa halkan yimid oo maalintii xigtay ayuu shaqo bilaabay. Haatan waa la wareegay. ”
Tom: "Waxaan ahay jiilkii saddexaad, wuxuu kala wareegay aabihiis Norway."
Bjorn wuxuu soo bandhigayaa bilado badan oo isboorti oo dalkiisa gudub ah. Isaga ayaa caan ka ah adduunka barafka dushiisa ee xirfad dheer iyo qurxin.
Bini'aadanka reer Minneapolis: Maxay adiga macno kuugu fadhidaa in waalidiintaadu ay ku helaan Cunto Lugaha?
Tom: “Waxaan dareemayaa fiicnaan maxaa yeelay waan ogahay inay wax cunayaan. Waxay helayaan cunto. Runtii uma baahnin inaan ka walwalo maxaa yeelay Hooyadu waa hal cuno karinta. Laakiin hadda ugu yaraan maahan inay cunto sameyso markasta. Marka seddex jeer usbuucii waxaan dareemayaa inaan sifiican u garanayo inay helayaan taas hubaal.
Bjorn: “Wax walba waa hunky-dory. Waxay u yimaadaan albaabka waxayna i weydiiyaan haddii aan wax u baahanahay iyo nooc kasta oo su'aalo ah oo ku saabsan sida aan dareemayo. Waana wax fiican. ”
Anne-Lise: “Waa wax fiican in qof kale loo helo cunnooyin aan cunno mar uun. Marka waan ku raaxeystaa taas. Way iga fududdahay sidaas. ”
Bjorn: "Iyadu waa cunto kariye ugu fiican adduunka si kastaba ha noqotee."
Haddii qof aad taqaanid uu ka faa'iideysan karo Cunnada Wheels, waxbadan ka baro helitaanka cuntada halkan.
Febraayo 7, 2019